के तपाइको नाम पनि A, B, G, M, P, T बाट सुरु हुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ रहस्य, प्रेममा बफादार हुन्छन् यस्ता युवतीहरू, छोड्दैनन् पार्टनरका हात - Aajako Nepali Khabar
के तपाइको नाम पनि A, B, G, M, P, T बाट सुरु हुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ रहस्य, प्रेममा बफादार हुन्छन् यस्ता युवतीहरू, छोड्दैनन् पार्टनरका हात
केही युवतीहरु युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् भने कोही युवतीहरु भने सोच विचार गरेर मात्रै प्रेम गर्छन । प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने युवतीहरु आफैमा बौद्धिक हुन्छन् ।
उनीहरुलाई समझदार मानिन्छ तर, पहिला नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरु कस्ता हुन्छन् होला ? उनीहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? र उनीहरुको प्रेम कति समयसम्म टिक्छ त ? आउनुहोस् जानाँै पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरुको बारेमा ।
A नामका युवती : पहिलो अक्षर ब् हुने युवतीहरुको स्वाभाव इमोशनल हुन्छ । यिनीहरु कुनै युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् । यस्ता युवतीहरु छिट्टै पार्टनरलाई विश्वास गर्छन् । ‘एक्स्ट्रा केयरिङ’ प्रकृतिका यस अक्षरवाली युवती जीवनभरी पार्टनरको साथ छोड्दैनन् ।
B नामका युवती : यस अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती संवेदनशील हुन्छन् । र, छिट्टै प्रेममा पर्छन् । उनीहरु आफ्नो साथीको बानीको बारेमा सचेत हुन्छन् । आफूले आशा गरेजस्तो नभएमा बिना साथी रहन पनि स्वीकार गर्छन् ।
G नामका युवती : यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेमको चक्करमा पर्छन् । पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने यस्ता युवतीहरु साँचो प्रेम गर्छन् । र जस्तो सुकै कठिन परिस्थितीमा पनि जीन्दगीभर साथ निभाउँछन् ।
M नामका युवती : यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती दिलवाली हुन्छन् । जति छिट्टो प्रेममा पर्छन् । जो उनीहरुको जीवनमा आउँछन् उनीहरुलाई जीवनभरी साथ छोड्दैनन् ।
P नामका युवती : प्रेम विवाहमा विश्वास गर्ने यस्ता युवतीहरु पनि छिट्टै प्रेममा पर्छन् । यिनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई कहिल्यै धोका दिँदैनन् । यद्यपि, यिनीहरुले कहिल्यै साँचो प्रेम पाउँदैनन् ।
T नामका युवती : यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेममा पर्छन् तर व्यक्त गर्नलाई हिच्किचाउँछन् । तर यिनीहरु आफ्नो प्रेम पाउनको लागि जे पनि गर्छन् । र जीन्दगीभर आफ्नो साथीको साथ छोड्दैनन् ।
हेर्नुहोस उनि भन्छिन, “अब म कहिल्यै काठमाडौँ नफर्कने वाचा गर्दै रोल्पा फर्किइन् दिलकुमारी “